Ke unokuqinisekisa ukuba i-iPhone itshixiwe yi-ICloud | IPhone iindaba
Nantsi indlela onokuqinisekisa ngayo ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
Njengoko usazi kakuhle, ngoJanuwari inkampani yaseCupertino yagqiba ekubeni iyeke ukubonelela ngenkonzo ekwi-intanethi eyayincedise abasebenzisi abaninzi bexesha lokuqala be-iPhone ukuba bathenge izinto ezilungileyo ezizezesibini, kwaye loo nto kukuba iApple yayinenkonzo yokufumanisa ngokuzenzekelayo yokuvimba i-iCloud kwiwebhusayithi yayo. Nangona kunjalo, yonke into ibekiwe, kwaye sele siyifumene, enkosi kubasebenzisi, indlela yokukwazi ukufumana ulwazi olufanayo usebenzisa ezinye iindlela. Ke unokuqinisekisa ukuba i-iPhone itshixiwe okanye hayi nge-iCloud ngendlela elula nange-Apple uqobo.
Ngokwenyani, njengoko siza kuyichaza, inokubonakala ngathi yeyokwenyani, kodwa abeendaba bayathanda Vulela iBot bafumanise ukuba iyasebenza ngokulula.
Okokuqala, Into esiza kuyidinga yi-IMEI okanye i-MEID ye-iPhone yethu okanye leyo sifuna ukuyijonga, siya kuyifumana ngokulula ebhokisini okanye kulwazi lwesixhobo ngaphakathi kuseto. Nje ukuba sibe sinayo ngesandla, siya kuya kwinkampani yeCupertino yenkxaso kwiwebhusayithi LONTO.
Ngoku kuya kufuneka sikhethe nawaphi na amacandelo ahambelana noko, ngaphandle kokukhetha, into ebalulekileyo kukuqhubela phambili kwaye ngoku uyazi ukuba kutheni. Nje ukuba usinike amandla okuba "siyithumele ukuze ilungiswe," siya kufaka ikhowudi kwibhokisi yokubhaliweyo eboniswe kumfanekiso wentloko. Ke, Ukuba sijongane nesixhobo esivaliweyo nge-iCloud, isilumkiso siya kuvela ebonisa ukuba asizokwazi ukuthumela esi sixhobo ukuba sitshixiwe ngoku yi-iCloud.
Ngale ndlela, sinokuthatha inyathelo lokuqala xa kufikwa ekufumaneni i-iPhone esetyenzisiweyo, siqinisekisa ukuba asinikwanga "jackpot".
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Nantsi indlela onokuqinisekisa ngayo ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
UBerenice gonzalez almendarez sitsho
Ndine iphone 6s itshixiwe plus ndilibele ne password
Bendicofa ii-apile kodwa azindiphenduli ndinetikiti lokuthenga ndithumele ifoto
Ndingenza ntoni ukuyivula?
Phendula uBerenice gonzalez almendarez
I-GPU ye-iPhone elandelayo iya kugxila kwinyani eyongeziweyo
Ngaba kulula kuSiri ukufunda ulwimi olutsha? Uyenza njani iApple ukukufundisa